मोदीले स्वीच थिचेर डिजल ‘सेन्ड’ गरे, ओलीले स्वीच थिचेर रिसिभ गरे
काठमाडौं । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्नै निवासबाट मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीबाट एकै पटक स्वीच थिचेर पाइपलाइनको..
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो, अब कति पर्छ ?
काठमाडौं । पेट्रोलियम पाइपलाइन उदघाटनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आयल निगमले प्रमुख तीन इन्धनको मूल्य घटाएको छ । पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलको साविक मूल्यमा २–२ रुपैयाँ घटाइएको निगमका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी..
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि नयाँ नोट असोज १४ गतेबाट वितरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। गत वर्षजस्तै यसपालि पनि राष्ट्र बैंकले तीन सरकारी बैंकसहित निजी क्षेत्रका बैंक तथा..
काठमाडौं । सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले भदौ २३ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। आसन्न चाडपर्व दसैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्ष्य गरी..
देशभर अण्डाको मूल्य एउटै बनाइने
काठमाडौं । देशैभर अण्डाको मूल्यमा एकरुपता ल्याउन अण्डा उत्पादक संघले पहल गर्ने भएको छ। अण्डाको मूल्यमा एकरुपता नहुँदा किसान व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै संघले मंगलबार काठमाडौंमा अण्डा उत्पादक किसान..
काठमाडौं । भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) मा विवरण भरेर मालसामान ढुवानी गर्नेको संख्या बढेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांक अनुसार औसतमा दैनिक ९ हजार सवारीसाधनले भीसीटीसमा विवरण भरेर..
अब ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ अभियान शुरु
काठमाडौं । झापाको मेचीनगरमा रहेका पेट्रोल पम्पमा ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ अभियान सञ्चालन सुरु गरेका छन् । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको अभियानलाई सहयोग गर्दै पेट्रोल..
आइएमईको ‘दशैँमा डबलको डबलको डबल’ अफर, आठ गुणासम्म पुरस्कार
काठमाडौं । आइएमईले पर्व लक्षित दशैँमा डबलको डबलको डबल अफर सार्वजनिक गरेको छ । यही भदौ १५ गतेदेखि कात्तिक मसान्तसम्म कायम हुनेगरी ७७ दिनका लागि सेवाग्राहीमुखी उक्त अफर सार्वजनिक गरिएको..
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्यान कार्ड नागरिकता जस्तै भएकाले सबैले लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री खतिवडाले अनौपचारिक व्यवसाय र आय आर्जनलाई..
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, यस बर्ष ४ महिना मै १४ हजार रुपैयाँले बढयो किन ?
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै सोमबार छापावाल सुन तोलामा ७३ हजार ५०० मा कारोबार भएको हो । नयाँ वर्ष सुरुमा ५९६००..
सुनको मूल्य बढेको बढै बनायो फेरि नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । सुनको मूल्य प्रतितोला ७२ हजार ५ सय पुगेको छ । यो नेपाली बजारमा भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मुल्य सार्वजनिक..
काठमाडौ । साउन २९ गते घटेको सुनको मूल्य आज फेरि बढेको छ। प्रतितोला ७१ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी मूल्य हो। यसअघि साउन २८ गते ७१..
सुनको मुल्य ७० हजार पुग्यो, वर्षमा १४ हजारले वृद्धि
काठमाडौं । नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्यले धमाधम आफ्नो रेकर्ड तोड्दै गएको छ । २०७५ को साउन २२ मा प्रतितोला सुनको मूल्य रू ५६ हजार १ सय रहेकोमा आज ७०..
ग्यासको मूल्य घट्यो,पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको बढ्यो, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा २५ रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ। निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी ग्यासको मूल्य घटाएको हो। अब उपभोक्ताले ग्यास १३ सय..
सुनको मूल्य ऐतिहासिक उचाईमा, ४ दिनमै २८ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमबार सुनको मूल्य एकैदिन एक हजार ५०० रुपैयाँले बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य निरन्तर उकालो..
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ल्याएको व्यापार तथा कर सम्बन्धि नीतिको संसोधन गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघको कार्यकारीणि समितिको बैठकले भीसीटीएस प्रणाली, आयकर ऐनको स्थायी लेखा..
काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वच्छ कर प्रशासनका माध्यमबाट राजश्व सङ्कलन गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै विकासलाई तीव्रता दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित..
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो, यस कारण बढ्यो मुल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ईतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले आईतबारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ६६ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम गरेको..
काठमाडौं । नेपालको पानी विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले रुद्र गङ्गा नेचुरल वाटर कम्पनीले रसुवा जिल्लाको हिमालय क्षेत्रबाट बगेर आउने स्प्रीङ पानीको उत्पादन सुरु गरेको छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले शुक्रबार विशेष..
एजेन्सी । विश्व बजारमा बिहीवार कच्चा तेलको भाउ घटेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएसँगै तेलको भाउ घटेको हो । पछिल्लो ६ दिनमा पहिलोपटक कच्चा तेलको भाउ घटेको हो..
काठमाडौं । नेपालका ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमध्येको एक सूर्य नेपाल प्रालिको कुल कारोबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७३/७४ मा रू ३१ अर्ब ८१..
एजेन्सी । आम्दानीका आधारमा विश्वकै ठूला कम्पनीको सूचीमा पहिलो पटक चीनले अमेरिकालाई पछाडि पारेको छ । १९९० मा विश्वव्यापी ग्गोबल–५०० सार्वजनिक गर्न थालिएयता चीनले आफ्नो व्यापार युद्धको प्रतिद्वन्द्वी मुलुक अमेरिकालाई..
काठमाडौं । वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली (भिसिटीएस)को विरोधमा ढुवानी सेवा ठप्प पार्ने गरि हड्तालमा उत्रेका व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने भएपछि हड्ताल फिर्ता लिएका..
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका संस्थान सेतो हात्ती भइरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भने त्यो आरोपको खण्डन गर्दै आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सही..
घर जग्गाको कर ९ सय प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । संखुवासभाका चार स्थानिय तहका घर जग्गाको कर ९ सय प्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि भएको छ । घरजग्गा न्युनतम मुल्याङनका निधार्रण समितीले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी मूल्य..
भोलीदेखि लागू हुने कर नीतिको विरोध
विराटनगर । साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सरकारको कर नीति कार्यान्वयनमा असहमति जनाउँदै विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । कर नीतिको विरोधमा विराटनगरका विभिन्न व्यापारिक संघहरुले मंगलबार प्रदर्शन गरेका..
काठमाडौं । एउटै बिलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य गराउने गरी सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागू गर्ने..
ग्रीन टी होइन, राम्रो स्वास्थ्यका लागि अब पिउनुस् ब्लू टी
काठमाडौं । स्वास्थ्यको चिन्ता गर्नेहरूले ग्रीन टी पिउने गर्छन् । तर अहिले ब्लू अर्थात् नीलो चिया बजारमा आएको छ । अपराजिताको फूलबाट यो चिया बन्छ । अपराजिताको फूललाई तातो पानीमा पकाउनुस्..
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावट रोक्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ’ सिस्टमको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यअसघि नै परीक्षणका रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको उक्त प्रणाली..
बीबीसी । ह्याकरदेखि आक्रोशित ग्राहक वा सामाजिक सञ्जालमा विरोधको सानो पोस्टले पनि व्यवसायमा ठूलो चोट पुग्न सक्छ । यसरी सामाजिक सञ्जालले केही मिनेटमै व्यावसायिक ब्रान्डहरुमाथिको विश्वास चकनाचुर पार्न सक्छ । रेपुटेसन..
Results 889: You are at page2of 30